မိခင်ရဲ့တစ်လပြည့်မှာ နောင်တစ်ချိန် အမေဂုဏ်ယူရမယ့် ကမ္ဘာကျော် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွာ းမယ်လို့ ကတိပြုလိုက်တဲ့ Russell – XB Media & News
မိခင်ရဲ့တစ်လပြည့်မှာ နောင်တစ်ချိန် အမေဂုဏ်ယူရမယ့် ကမ္ဘာကျော် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွာ းမယ်လို့ ကတိပြုလိုက်တဲ့ Russell
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ Russell ကတော့ည ရုပ်ရှင်ဇာ တ်ကားကြီ းနဲ့ပရိသတ် တွေ ရင်ထဲနေရ ာယူခဲ့သူပါ။ အိပ်မက်ဆုံရာသီချင်းပြိုင်ပွဲကလည်း သူ့အတွက် အနုပညာခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း Mcအနေနဲ့လည်း မကြာမကြာပွဲတွေမှာမြင်တွေ့ရလေ့ရှိသူပါ။
မကြာသေးခင်ကမိခင်ကြီးရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားမှုကြာင့် ဖြေမဆည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Russellကတော့ ဒီနေ့ဟာ သူ့ရဲ့မိခင်ကြီးဆုံးပါးစွားတာ၁လပြည့်ဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို စာလေးရေးကာ ပြောပြခဲ့တာပါ။”မနက်ဖြန်ဆို တစ်လပြည့် ပြီ အမေ …. ❤️အရင်လိုမျိုး သူ့သားရဲ့ ရုပ်ရှင် အထူးပွဲတွေ အတူတူ တက်ခွင့်မရတော့ပေမယ့် နောင်တစ်ချိန် အမေဂုဏ်ယူ ရမယ့် ကမ္ဘ ာကျော် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်အောင် ကျနော်ကျိုးစားသွားမှာပါ …. ❤️အမေပေးခဲ့တဲ့အားနဲ့ ကျနော် အမြဲရှေ့ဆက်နေမှာပါ ❤️
ပုံလေးကတေ ာ့ ကျနော်ရဲ့ ပ ထမဦး ဆုံး “ ည “ ရုပ်ရှင်ရုံတင်ကားကြီး Press show အမှတ် တရမ နက်ခင်းလေးပါပဲ ….”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဇ ာတ် ကားကြီးရဲ့ အမှတ်တ ရထဲမှာလည်း အမေပါဝင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့တာ ပါ။ အမေတစ်ခုသားတစ်ခုမို့ မိခင်ကို​ဆုံးရှုံးရချိန်မှာအနားမှာရှိမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ခံစားချက်နဲ့ မိခင်ကိုတမ်းတလွမ်းဆွတ်နေတဲ့ Russellအတွက်အားပေးစကားပြောခဲ့ပါဦးနော်။
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ Russell ကေတာ့ည ႐ုပ္ရွင္ဇာ တ္ကားႀကီ းနဲ႔ပရိသတ္ ေတြ ရင္ထဲေနရ ာယူခဲ့သူပါ။ အိပ္မက္ဆုံရာသီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲကလည္း သူ႔အတြက္ အႏုပညာေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း Mcအေနနဲ႔လည္း မၾကာမၾကာပြဲေတြမွာျမင္ေတြ႕ရေလ့ရွိသူပါ။
မၾကာေသးခင္ကမိခင္ႀကီး႐ုတ္တရက္ဆုံးပါးသြားမႈၾကာင့္ ေျဖမဆည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ Russellကေတာ့ ဒီေ န႔ဟာ သူ႔ရဲ႕မိခင္ႀကီးဆုံးပါးစြားတာ၁လျပည့္ျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္ေတြကို စာေလးေရးကာ ေျပာျပခဲ့တာပါ။”မနက္ျဖန္ဆို တစ္လျပည့္ ၿပီ အေမ …. ❤️အရင္လိုမ်ိဳး သူ႔ သားရဲ႕ ႐ုပ္ရွင္ အထူးပြဲေတြ အတူတူ တက္ခြင့္မရေတာ့ေပမယ့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အေမဂုဏ္ယူ ရမယ့္ ကမၻ ာေက် ာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္က်ိဳးစားသြားမွာပါ …. ❤️အေမေပးခဲ့တဲ့အားနဲ႔ က်ေနာ္ အၿမဲေရွ႕ဆက္ေနမွာပါ ❤️
ပုံေလးကေတ ာ့ က်ေနာ္ရဲ႕ ပ ထမဦး ဆုံး “ ည “ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတင္ကားႀကီး Press show အမွတ္ တရမ နက္ခင္းေလးပါပဲ ….”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဇ ာတ္ ကားႀကီးရဲ႕ အမွတ္တ ရထဲမွာလည္း အေမပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့တာ ပါ။ အေ မတစ္ခုသားတစ္ခုမို႔ မိခင္ကို​ဆုံးရႈံးရခ်ိန္မွာအနားမွာရွိမေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႔ မိခင္ကိုတမ္းတလြမ္းဆြတ္ေနတဲ့ Russellအတြက္အားေပးစကားေျပာခဲ့ပါဦးေနာ္။
Interviewer ထဲမှာ အရမ်းသဘောကောင်းတဲ့ သတင်းထောက် မမှူးရတနာခက်မို့မို့ထွန်းအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဘုန်းမင်းနေလ